စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု Disorder post (PTSD) | USAHello | USAHello
တစ်ဦး GED Get®
ဒါခေါ် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ, PTSD လည်း. PTSD သဘာဝစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ရပ်မှတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်နှေးကွေးနေသေးတယ်.
ဥပမာအားဖြင့်, လူကြောက်မက်ဘွယ်သောကားတစ်စီးမတော်တဆမှုခံစားနေရပြီး. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အိပ်မက်ဆိုးများအိပ်မရနိုင်သလား. ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်အပျက်၏အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်သူ့အိမ်သွားကိုရပ်တန့်.
ဒါဟာတဆိုးရွားလှသောဥပဒေဖြစ်ရပ်အပြီးမတူညီတဲ့ခံစားရကြောင်းသဘာဝ. ဒါဟာခက်ခဲဖြစ်ရပ်အပြီးကွဲပြားခြားနားပြုမူဖို့လည်းသဘာဝ. ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ရပ်ခံစားပြီးနောက်လပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်နှစ်ပေါင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောပြုမူ. သငျသညျ post ကိုစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါရှိစေခြင်းငှါ. ကူညီမယ့်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ဆရာဝန်စကားပြော.
သငျသညျ post ကိုစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါရှိသည်ဆိုပါကသင်ကအကူအညီရနိုင်. သငျသညျဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးလာလျှင်အံ့ဩသည်နှင့်သင်ဝမ်းနည်းခံစားရ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးထက်ပိုလအဘို့ဤဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအိပ်မက်ဆိုးရှိပါက, ကိုကူညီကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြော.